Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamatye anqabileyo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha ngamatye anqabileyo
2 Kubonisa ntoni ukuphupha ngamatye axabisekileyo?
3 Jonga amatye anqabileyo
4 Ngamatye axabisekileyo aqhekeziweyo
5 Ukuhamba phezu kwamatye anqabileyo
6 Phosa amatye anqabileyo komnye umntu
7 Ukurhangqwa ngamatye axabisekileyo
8 Kufuneka wenze ntoni xa ndiphupha amatye anqabileyo?
Ukuphupha ngamatye anqabileyo
Ukuphupha ngamatye anqabileyo ngumqondiso ocacileyo woku kwaye kuya kufuneka uqhubeke ulwa. Ukuba uphuphe ngayo, ikwangumqondiso wokuba ukuchuma kuya kuza ngokukhawuleza ebomini bakho. Olu hlobo lwamaphupha lubonisa ukuba kuyakuthatha inkuthazo enkulu ukoyisa bonke ubunzima obuvelileyo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukwazi eyona ntsingiselo yeli phupha kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kumxholo wento ephuphileyo. Abanye bakholelwa ukuba iya kuba luphawu olufanayo lomntu wonke, kodwa oku akusoloko kunjalo. Namhlanje uya kuba nethuba lokufunda zonke iinkcukacha malunga nolu hlobo lwamaphupha xa uwonke.
Kubonisa ntoni ukuphupha ngamatye axabisekileyo?
Olu hlobo lwamaphupha lubonisa ngokucacileyo imeko apho kuyakufuneka ukuba uqhubeke nokulwela iinjongo zakho. Ukuphupha ngamatye anqabileyo luphawu lokuba wonke umsebenzi wokwenza amatye uya kuba yimfuneko kubomi bakho kwaye ke uya kuba nethuba lokufumana yonke imiqathango yokufumana iziphumo ezifanayo.
Wonke umntu onokuphupha ngamatye anqabileyo uya kuba nethuba elihle lokukhula. Ukuchuma kuyeza kwaye ngakumbi ithuba lokuqhubeka nokuvela. Zama ukumkela le kwaye wonwabele zonke izibonelelo oya kuba nazo ngayo.
Jonga amatye anqabileyo
Ukuba uphuphe eli phupha lilungile kwaye kwangaxeshanye lilizwi elibi ngokunxulumene nentsimi yakho yobungcali. Kuya kufuneka usebenze nzima emsebenzini wakho ukufezekisa zonke iinjongo zakho. Kungoko kuphela apho uya kuba nakho ukuvuna iziphumo kungekudala.
Zama ukucinga ukuba lo mzamo wokusebenza nzima linyathelo elinye nje ukuya kwinto oyifunayo kakubi. Inqaku elinye kukungakhalazi, kuba kuya kuba lula ngakumbi ukufunda eso sifundo sinzima ebomini bakho kwangaphambili.
Ngamatye axabisekileyo aqhekeziweyo
Uya kuphulukana namathuba athile, kuba oku kuqhelekile kwaye ekugqibeleni uya kuba nethuba lokuqalisa kwakhona. Ukuphupha ngamatye anqabileyo aqhekekileyo luphawu olucacileyo loku kwaye kuya kufuneka unikele ingqalelo. Zama ukunxibelelana ngakumbi kwepeyinti, kuba kungathatha ixesha elide ukuba iphinde yenzeke.
Zama ukuqonda ukuba yonke into ebomini yinkqubo yokufunda kwaye ufunde ukuba ungachithi amanye amathuba. Unokufumana ukonyuselwa emsebenzini, oko kuthetha ukuba unethuba elihle lokunyuselwa emsebenzini.
Ukuhamba phezu kwamatye anqabileyo
Ukuphupha ngamatye anqabileyo sele kungumlo womzabalazo omkhulu wokufumana iziphumo, kodwa ukuba uhamba kuwo kuyingozi ngakumbi. Kuya kufuneka ubakhathalele abantu abasondeleyo kuwe kuba kunokwenzeka ukuba bakwenzele iingxaki.
Kuyaboniswa ukuba kukho into oyiqwalaseleyo kwaye kufuneka uqaphele ukuba ngubani lo mntu. Ayisoloko isisigqibo esifanelekileyo ukuya kungquzulwano kwaye incoko inokusombulula imeko. Zama ukuthetha ngakumbi kwaye ngamanye amaxesha omnye umntu ufumana umbono ombi kuwe.
Phosa amatye anqabileyo komnye umntu
Ukuba ukhe wanolu hlobo lwamaphupha, kuya kufuneka uhoye ngakumbi kuba uchitha ixesha kunye nezo ungakufanelekelanga. Ukucamngca kuyimfuneko kwaye ukufumanisa apho ungalunganga kunomdla kwaye kungonga umzamo. Zama ukungacingi ngezinto ezingekenzeki kwaye ujonge kwikamva.
Eyona nto ifanelekileyo kukufunda ukuba yonke into eyenzekayo ebomini inenjongo kwaye kungcono ukucinga kwakhona. Ukuba uqala ukugxila ngakumbi kuwe, unokukwazi ukukhula kunye nokufezekisa zonke iinjongo zakho. Kule mihla, abantu banexhala kakhulu malunga nenqanaba kwaye bayalibala ukuba ukucinga malunga nokuzayo kubhetele.
Ukurhangqwa ngamatye axabisekileyo
Ujikelezwe ngabantu abafuna ukukunceda kwaye ngelishwa awukaqondi. Ukuphupha ngamatye anqabileyo akufutshane nawe luphawu lokuba kufuneka unike ingqalelo kwabanye. Ngokukhawuleza uza kubona ukuba eli phupha belililizwi elihle kubomi bakho, kuba ulumkisiwe.
Zama ukuyiqonda le mvakalelo kwaye ufunde ukuba ngamanye amaxesha uThixo uthetha nathi ngamaphupha. Ukuba abantu bafunda ukumamela ngakumbi kwi-intuition yabo, banokufumana okuninzi ngakumbi kuyo.
Kufuneka wenze ntoni xa ndiphupha amatye anqabileyo?
Elona gama lifanelekileyo kuwe kukubonakalisa isimo sakho sengqondo xa sisonke. Xa unokufunda kwiimpazamo zakho kwaye ungenzi iimpazamo ezininzi usenokuba usifundile esona sifundo sakho ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ukuphupha ngamatye anqabileyo luphawu lokuba yonke into inokuphucuka kwaye ixhomekeke kuwe kuphela. Kholelwa ngakumbi kuwe, lungiselela ukuphucula kwaye uqokelele iziphumo!